အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ အဖေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ အဖေ
အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ အဖေ
Posted by မြစပဲရိုး on Sep 30, 2011 in Arts & Humanities, Editor's Choice, History | 39 comments
လို့ စာသားပါ “အောင်ဆန်းဇာနည်” ဆိုတဲ့ ကဗျာကို ငယ်ကထဲ ရွတ်၊ အာဇာနည်နေ့ ဆို အထိမ်းအမှတ် ပွဲတွေ လုပ်ခဲ့လေ့ ရှိတာကြောင့် “ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း” ဆိုတာ သူရဲကောင်း ဆိုတာ သတိထားခဲ့ မိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငယ်သေးတာမို့ လေးစားထိုက်သူ လေးစားရမယ် ဆိုတာကလွဲလို့ စိတ်ထဲမှာ အလေးအနက် မရှိခဲ့ပါဘူး။ အသက်ကြီး လာတော့ စာအုပ်အစုံဖတ်နိုင်လာချိန်မှာ သူ့အကြောင်းတွေ၊ သူ့မိန့်ခွန်း တွေ ကိုဖတ်ရင်း ရင်ထဲကကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ နဲ့ လေးစားကြည်ညိုလို့ မဆုံးခဲ့ပါဘူး။
အခုလဲ ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်ဟာ ခေါင်းဆောင်ကောင်း လိုပါတယ်။ အခုတလော အင်တာနက် ဆောင်းပါးတွေ ထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို အပုတ်ချဆောင်းပါးတွေ ဖတ်လာရပါတယ်၊ တစ်ချို့ဆိုရင် နင့်နင့်သီးသီး နဲ့ ကို အဆင်အခြင်မဲ့ ဆဲဆိုသလိုကို ရေးနေကြပါတယ်။
တကယ်တော့ ကျွန်မ နိုင်ငံရေးအကြောင်း မသိပါ။ စစ်အစိုးရ နဲ့လဲ အဆက်အစပ်မရှိပါ။ အများလူထုထဲက သာမာန်ပြည်သူ တစ်ယောက်ပါဘဲ။ စစ်အစိုးရရဲ့ တစ်ကိုယ်ကောင်း ဆန်ဆန် ကိုယ်ကျိုးအတွက်သာ လုပ်နေခဲ့တာ ကြောင့် ဆင်းရဲတွင်းနက်သထက်နက်၊ အသိပညာ နဲသည်ထက်နဲ လာရတဲ့ ပြည်သူလူထု အများစု လူ့ငရဲကလွတ်စေချင်ပေမဲ့လဲ လွတ်အောင် ဘာမှမလုပ်တတ်၊ မလုပ်ရဲသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၈ အရေးအခင်းအပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စထွက်လာတော့ လဲ အားကိုးစရာ လို့ သိပ်မထင် ခဲ့ပါဘူး။
နောက်ပိုင်း ပါတီဖွဲ့ လှုပ်ရှားနေ လဲ ကျွန်မ ဟာ ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ်ပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ တဖြေးဖြေး နဲ့ သူ့ရဲ့ တိုင်းပြည်အတွက်၊ ပြည်သူလူထု တွေအတွက် ဘဝ ကို နှစ် အနစ်နာခံ ပေးနေတာကို ကြည့်ရင်း ကျွန်မ သူ့ကို လေးစား ပါတယ်။ တော်ရုံ လူ မလုပ်နိုင်တဲ့ သူ့ရဲ့ ဇွဲ နဲ့သတ္တိ ကို မြင်လာတယ်။ ဆင်းရဲတွင်းနက်နေတဲ့ လူထုအတွက် ရှေ့က ရပ်ပေးနေတာကို ကြည်ညိုလာပါတယ်။ တစ်ခြားလူတွေ လဲ တိုင်းပြည်အတွက် ချစ်စိတ် နဲ့ လုပ်နေတာ ကို သိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရှိန်အဝါခြင်းက မတူဘူး ဆိုတာကို လက်ခံကြရပါမယ်။ အဲဒါကို လက်မခံနိုင်ရင်တော့ အမှန်တရားကို မသိတာ၊ မသိချင် ယောင်ဆောင်နေတာပါဘဲ။
သူမဟာ သူမရဲ့ အဖေ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကို မမှီနိုင်ဘူး ဆိုဦးတော့။ သူမ အဖေလို အင်္ဂလိပ်စာကောင်းတယ်၊ နိုင်ငံရေးပညာတတ်တယ်၊ လက်ရှိ ကမ္ဘာ့ ခေါင်းဆောင်တွေ နဲ့ ရင်ဘောင်တန်း ပြောဆိုနိုင်တယ်၊ သူမဟာ စာဖတ်တယ်၊ စာရေးတယ်။ သူမအကြောင်း အများကြီးမသိသေး ပေမဲ့ သူမဟာလဲ သူမ အဖေလို စိတ်ဓာတ် မြင့်မြတ် တည်ကြည် မယ်လို့ ကျွန်မ ယုံပါတယ်။ သူမဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နဲ့ ချွတ်စွတ်တူ တဲ့ Clone တော့ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လို ပြည်သူလူထုရဲ့ ချစ်ခင်မှု နဲ့ လူထုရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ချင်သူ၊ လူထုကို ချစ်သူ ဖြစ်တာတော့ သေချာပါတယ်။ အဓိက ကတော့ သူမ ဟာ သူမ အဖေလို စိတ်ဓာတ်ရှိအောင် ဘဝ တစ်လျှောက် ကျင့်လာမှာပါ။
ကျွန်မတို့ အားလုံး ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် က တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေး၊ ပြည်သူလူထု ဆင်းရဲ တွင်းက ထွက်ရေး လို့သာ ဖြစ်မယ်ဆိုရင် သူခေါင်းဆောင်တာကို ကျွန်မတို့ ဘာလို့ မလိုက်နိုင်ရမှာလဲ။ ပြည်သူလူထု ငရဲကထွက်ဖို့ အတွက် ဂိုဏ်းဂနစွဲတွေ ဖြုတ်သင့်ပါ တယ်။ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံက စာသင်ချင်ရက်နဲ့ စာမသင်ရတဲ့ ခလေးတွေ၊ နေဝင်ချိန်ရောက်မှ ဆေးဖိုးမပြောနဲ့ ထမင်းနပ်မှန်တောင် မစားရတဲ့ လူအိုတွေ၊ ဆင်းရဲခြင်းသားကောင် အဖြစ် ဘဝပျက်နေရတဲ့ ညီမငယ်လေးတွေ၊ ဘဝတိုးတက်ရေး ကြိုးစားချင်ပေမဲ့ ကြိုးစား ဖို့ အခွင့်အလမ်းတောင် မှ မရရှာတဲ့ လူငယ်လေးတွေ အတွက် “ကျွန်မတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်” ကို ယုံကြည်ကြပြီး အားလုံးစည်းလုံးကြမယ် ဆိုရင် မဖြစ်နိုင်စရာ ဘာမှမရှိပါဘူး။
တကယ်တော့ လက်နက်စွဲတိုက်မှ တော်လှန်ရေးမဟုတ်ပါဘူး။ နှလုံးရည် နဲ့လဲ အောင်မြင် နိုင်ပါတယ်။
ဒီလို တိုင်းပြည်အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဖို့အခွင့်အရေး ဆိုတာ နှစ်ခါ မရနိုင် ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ ငရဲကလွတ်ဖို့ ဒီနည်းကလွဲလို့ မရှိပါဘူး။ မဟုတ်ရင် ကျွန်မတို့ ထူးမခြားနား ပါတ်ပျိုး နဲ့ဘဲနေနေ ရပါလိမ့်မယ်။
I believe that she can do it.
တကယ်လို့ တစ်စုံတစ်ယောက်မှ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင် လုပ်ချင်ရင် အောင်ဆန်းစုကြည် အဖေလို နေနိုင်လား စမ်းစစ်ကြည့်ပါ။
နေနိုင်ရင် ကျွန်မတို့မြန်မာလူထု အားလုံး ရဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဖြစ်မှာ မလွဲ ပါဘူး။
ကျွန်မ ကတော့ သမ္မတကြီး အထိ သတင်းပို့နိုင်အောင် မပေါက်ရောက်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဘီဘီစီ က ရေးနေတာ သတင်းမှား တွေဖြစ်ခဲ့တာ သေချာရင် လှမ်းပြီး စာပို့ ကာ အသေအချာ သတင်းမှန် ပေးဖို့ ကို တာဝန်ယူပါတယ်။
ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင်မှာလဲ အကြမ်းဖက်တာ ဘယ်သူ ဆိုတာ အသေအချာ ရှင်းပြပါ့မယ်။
ဒါပေမဲ့ သမ္မတကြီးလဲ သိပြီးနေလောက်ပါပြီ။
(ဘယ်ကိစ္စမဆို လုပ်ရင်မှားတယ် မှန်တယ် ဆိုတာ ရာဇဝင်က ဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်။)
မှန်တာပြော မှန်တာလုပ်ခဲ့လို့ သူ့လုပ်ရပ်ကို သူယုံကြည်ပြီး ရဲရဲတောက် ပြောသွားခဲ့တာပဲ။ လေးစားဂုဏ်ယူစရာပေ့ါ။
ကျွန်မ ဂေဇက်ရွာထဲ ကို ဒီ Post လေးရေးပြီး စဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီတုန်းက အပြင်မှာ ကြားရတဲ့ အသံတွေကို မခံနိုင်လွန်းလို့ ရင်ဖွင့်ခဲ့တာပါ။
အခုပြန်လည် ဆန်းသစ်ချင်လို့ ကျွန်မ အစ ပြန်ထုတ် လိုက်ပါတယ်။
ပန်းသီး ရဲ့ အဖေ ကိုတင် မဟုတ်ပါဘူး။
အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ အဖေ ကိုလဲ ကျွန်မ အရမ်းချစ်ပါတယ်။ ကြည်ညိုပါတယ်။
ကျွန်မ ရဲ့ Role Model ပါဘဲ။
ပိုစ့်တွေ မတင်ခင် ဆရာသစ် ပိုစ့်တွေမှာ ကွန်မန့်တွေ ပေးနေကတည်းက သဘောကျလွန်းလို့
ဒို့ရွာထဲမှာတော့ ရဲရဲတောက် အမျိုးသမီးအာဇာနည် ပေါ်လာပြီဆိုပြီး (ထုတ်ဖော်မပြောပဲ) ၀မ်းသာနေတာ။
ပဒုမ္မာကိုတောင် (သူက ကိုယ့်လောက် ရွာလည်ဖို့ အချိန်မရှိတော့) လက်တို့ပြောပြီး ဖတ်ခိုင်းမိတာ။
အမှတ်တရ ရေးပေးလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ကျမလေးစားကြည်ညိုရတဲ့သူမို့ သူ့အကြောင်းတွေကို ခုလို ရေးပြပြောပြတာကို သဘောကျတယ်။
BC ပေးတဲ့အတွက်ရော၊ အမှတ်တရ ရေးပေးလို့ရော ၀မ်းသာပါတယ်။
အရီးရေ လေးစားပြီးရင်းလေးစားပါတယ် ခင်ဗျာ။
အားလုံးသော အယူအဆများ(တစ်ချို့ မပါ) ဟာအတူတူပါဘဲ။
တစ်ခါတစ်လေတော့လဲ စစော်ကားလွန်းလာရင်တော့ အရမ်းသဘောထားမကြီးနှိုင်ပါကြောင်းးးး
လူလူချင်း မတရားတာ၊ ဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်တာ ကို ငုံ့မခံသင့်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ တရားဥပဒေဘောင်ထဲ က ပြန်တိုက်ရပါမယ်။
ဝမ်းနည်းစရာက အရီးတို့ပြည်မှာ မျှတကောင်းမွန်ခိုင်ခန့် တဲ့ ၊ အမှန်တရား အတွက် အကာအကွယ်ပေးမဲ့ ဥပဒေ တည်မနေတာပါဘဲ။
တကယ်တော့ မရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဖြစ်လာအောင် တို့တစ်တွေ ကြိုးစားကြတာပေါ့။
တကယ်တော့ ဒါကို ဖော်ချင်လို့ စင်းဒရဲလား ဇာတ်ကပြ ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး သူကြီးရယ်။
ကဘချော ရဲ့ အမည်ဝှက် လုပ်တာကို သဘောကျလိုက်လို့ ပါ။
နောက် ကိုကြီးမိုက် ကိုလဲ နောက်ချင် လိုက်လို့ပါ။
နောက် ရွာမှာ အပြောင်းအလဲ Post လေး ရအောင်လို့ပါ။
ဒါပေမဲ့ ဒီလိုလေး ရှေ့ကို ပြန်ထုတ်ပြလိုက် လို့ အရမ်းကြီး၊ တကယ်ကြီး ကျေးဇူးပါဘဲရှင်။ :-)
တနေ့သောအခါ အဇ္ဈတ္တသဏ္ဌာန်အဇ္ဈတ္တသဏ္ဌာန် မြင့်မြတ်မှု နှင့် ဗဟိဒ္ဓသဏ္ဌာန် တိုးတက်မှုတို့ ကိုက်ညီသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်မှန်းရာ ဖြစ်သော ကမ္ဘာ့ အိမ်ထောင်စု ဖြစ်လာမည်မှာ မလွဲဧကန်ဟု ဆိုရပေမည်။
ဒီနေ့ ဘယ်လောက်ပဲ ရေသန့်တွေပေါ်ပေါ်.. ရေတွေ ဘယ်လောက်သန့်သန့်.. ရေကိုထည့်တဲ့ ဗူးနဲ့ ခွက်က ညစ်ပတ်နေရင်.. ရေသန့်လဲ သန့်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အသိညာဏ်က မတိုးတက်ပဲ သိပ်ပံက တိုးတက်နေရင် လူမိုက်လက်ထဲ ဓားရောက်သွားသလိုနေမှာပဲ။ သိပ်ဆိုးဝါးသွားတယ်။
လူကောင်းလက်ထဲ ဓားရောက်မှ လောကအကျိုးများမှာ အရီးရယ်။
13-2-1915 ( 1+3+2+1+9+1+5 =2+2=4* )
19-7-1947 ( 1+9+7+1+9+4+7=3+8=1+1=2*)
4-1-1948 ( 4:20 ) ( 4+1+1+9+4+8+4+2+0 =3+3=6 # )
8-8-1988 ( 8+8+1+9+8+8 = 4+2=6# )
( Thanks! D-Lay Khin Latt ! I think…I was too much thinking. Too much something no good? )
မန်းဂေဇက်မှာ ဒီလိုအဖိုးတန် ပို့စ်တွေမှာ ကော်မန့်နည်းတတ်ပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဝင်ပြောဘို့ရာ နဲနဲခက်တတ်လို့ပါ။
ဝင်ပြောဘို့လွယ်တဲ့ ပို့စ်တွေမှာ တော့ တခဏအတွင်းမှာကိုကော်မန့်တွေ
အစ်မမခင်လတ်ရဲ့ဆောင်းပါးအရ လိုအပ်ချက်က တခုထဲပါဘဲ။
ဟုတ်ကဲ့ “ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်း” ပါဘဲ။
လူတွေဟာလူရှေ့သူရှေ့မှာတော့ ဟန်ဆောင်ရိုးသားတတ်ကြပေမဲ့ လူမမြင်ရာမှာ/လူမသိရင်
လူရှေ့သူရှေ့မှာဘဲ “ဟန်ဆောင်တတ်ကြတာကလဲ =မရိုးသား” ဆိုတော့မရိုးသားတာမျိုးပါဘဲ။
ကိုယ့်အားနဲချက်ကိုဖုံးကွယ်ရင်းနဲ့လူတွေဟာမရိုးသားမှုကို အမြစ်တွယ် ကျင့်သုံးနေမိကြရပါတယ်။
ကျနော်တို့”အမြဲ” ရိုးသား”ရန်” ကြိုးစားကြရပါမယ် ……………………….
ဆိုတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျလေးကို ပေးထားတဲ့ဒီဆောင်းပါး
လေးကို ရေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါလို့ ရိုးသားစွာပြောပါစေ..
တက္ကသိုလ်ကို တတိယ အကြိမ် ပြန်ရောက် လာပြီး ဥပဒေတန်း တက်နေတယ်။ ခုလန်ဒန်မှာ AFPEL
ကိုယ်စားလှယ် လုပ်နေတဲ့ ကိုအုန်းက ကျောင်းသား သုံးယောက်နဲ့ တွေ့ဖို့
အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ အဖေ ကျတော်တို့ရဲ့ထာဝရ သူရဲကောင်းကြီးဟာ သူ့ဘ၀သက်တမ်းတိုတိုလေးအတွင်းမှာ၊ သူ့ယုံကြည်ချက်တွေကို သူချစ်တဲ့၊ သူမြတ်နိုးတဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက်ပြောရင်း၊ ဟောရင်း၊ သူမတူတဲ့ဇွဲလုံ့လနဲ့ အသက်ကိုယ်တောင်ပဓာနမထားပဲ လုပ်သွားခဲ့တာပါ။ ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ သူစကားတွေ နားထောင်ဖြစ်တိုင်း၊ ပြန်ဖတ်ဖြစ်တိုင်း၊ အစားထိုးလို့မရနိုင်တော့တဲ့၊ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဆိုတာ၊ ကမ္ဘာတည်သ၍၊ တည်နေမှာပါ။
ဗမာပြည်တိုးတက်ဖို့အတွက် ဒီလိုလက်တွေ့အသေခံမည့်သူ့တွေကို ကျွန်တော်စောင့်နေပါတယ်၊
စာရေးတဲ့သူတွေအနေဖြင့် အသက်အရွယ်အားဖြင့်သော်၎င်း၊ ယဉ်ကျေးမူအရသော်၎င်း၊ အမေစုကို ဒေါ်တပ်ခေါ်ပေးကြပါ။ အာချောင်မယ်ဆိုရင် ဝေးဝေးနေပေးပါ။
မလတ်က ဒေါ်စုကို မချစ်လို့ မလေးစားလို့ ဒေါ်မတပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ခါတစ်လေ ဦးဒေါ်တွေတပ်တာဟာ လေးနက်မှုကိုလျော့စေပါတယ်။
ကျမတို့ထက်အသက်ကြီးတဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး ၀င်းဦးကို ဦးဝင်းဦးလို့ခေါ်ရင်မထိသလိုပေါ့။
စာရဲ့ခေါင်းစဉ်က ဗိုလ်ချုပ်ကို အလေးပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒေါ်ထည့်ပြီး ဖတ်ကြည့်ပါ။
ဖတ်မိသူများလည်း အထင်မလွဲအောင်ပါ။ရေးသူမလတ်က မဖြေရှင်းဘဲ မယ်ဘော်က ကဲနေတယ်လို့တော့ မထင်ပါနဲ့နော။
ဟုတ်ပါတယ် ကောင်းကင် နှလုံးသား နဲ့ ကိုဝင်းကို ရယ်။
နာမည် မှာ “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ အဖေ” ဆိုရင် သိပ် ဟန်မကျသလို တွေးလို့ပါ။
အနောက်တိုင်း မှာ နေခဲမို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လဲ သူ့ကို ဒေါ် မပါဘဲ ခေါ်တာ သဘောပေါက်မှာပါ။
မရိုမသေလုပ်တာ လုံးဝ (လုံးဝ) မဟုတ်ရပါ တာမွေလူမိုက်ကြီးရယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် ကျွန်မ တောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ အနီးကပ် သက်တော်စောင့် လုပ်ပေးချင်တာ သူထိုင်းကို သွား ကထဲ ကပါဘဲ။
အစ်မပဒုမ္မ္မာ ရေ – ကျေးဇူး အကြီးကြီးပါနော။ :-)
အစ်မရဲ့ ပထမဆုံး ပို့စ် ကို ကွန်းမန့်မပေးခဲ့မိတာ
တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင် လုပ်ချင်ရင် အောင်ဆန်းစုကြည် အဖေလို နေနိုင်လား စမ်းစစ်ကြည့်ပါ။ နေနိုင်ရင် ကျွန်မတို့မြန်မာလူထု အားလုံး ရဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဖြစ်မှာ မလွဲပါဘူး။
အခုမှ ပြန်ဖတ်ပြီး ပြန်မန့်ခဲ့ပါတယ်။
မနေ့က အစ်မရဲ့ ပဟေဌိကို အဖြေညှိဖို့ ပို့စ်အဟောင်းတွေဆီ
စိတ်ရှည်လက်ရှည်ပြန်လှန်ခဲ့ပေမယ့် ဘယ်လိုမှ မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။
အဖြေက ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုကြီးမိုက် ဖြစ်နေတော့
အံ့သြ၀မ်းသာ ဂုဏ်ယူ သွားပါတယ် အစ်မရေ။
ဗိုလ်ချုပ်လို လူ…သူရဲကောင်းနောက်တစ်ယောက်လောက် တမ်းတ မိပါရဲ့ဗျာ….
ဗမာတွေ စိတ်ထက်သလေးဘာလေးနဲ့ တလွဲဆံပင်ကောင်းနေကြတယ်။
အရမ်းကို ကောင်းတဲ့ မိန့်ခွန်းပဲဗျာ….
အရီးလတ်ရဲ့ပို့စ်တစ်ခုကို သူကြီးကစတစ်ကီပြန်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ …….. အရီးရေ သမီးကနိုင်ငံရေးတွေကို မဖတ်ဖြစ်တာများပါတယ် ……. ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့စိတ်ဝင်စားလို့ဝင်ဖတ်ပါတယ် ……. နိုင်ငံ ရေးကိုစိတ်မ၀င်စားဘူးဆိုတာထက် မသိကျော်ချဆိုပါမှန်ပါတယ် သမီးလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အတွက် မျိုးချစ်စိတ် မဟုတ်မခံစိတ်ရှိပါတယ် သွေးလည်းဆူတတ်လို့ သွေးအေးအောင်မသိကျိုးကျွန် ပြုနေရတာပါ…….
အရီးရေ ဗိုလ်ချုပ်ကျဆုံးခဲ့တဲ့နေ့ ဇူလိုင် (19) ရောက်တိုင်း သမီးတို့ငယ်ငယ်က ဥသြတွေဆွဲတယ် ရေဒီယိုကနေ ၀မ်းနည်းတဲ့အထိန်းမှတ်တွေလုပ်ပေးတာတွေကို ဗိုလ်ချုပ်ကိုလွမ်းဆွတ်မိတယ် ကျောင်းမှာစာသင်ကတည်းက ဆရာမတွေက ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့လေးစားထိုက်ပုံကို စာထဲပါအကြောင်းအရာတင် မကပဲ ပြောပြခဲ့လို ငယ်စဉ်ကတည်းကလေးစားခဲ့ရပါတယ် ……..ယနေ့အချိန်ထိပေ့ါ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့မိန့်ခွန်းတွေက အခုချိန်ထိကို အသက်ဝင်နေတုန်းပါပဲလို့ ယုံကြည်မိပါတယ် ………
ကျနော်တို့ငယ်ငယ်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမိန့်ခွန်းကို အာဇာနည်နေ့ ညတိုင်းမှာ မြန်မာ့အသံကလွှင့်ပေးတတ်ပါတယ်။
ပန်းတိုင်မရောက်ခင် တက်မ မထောင်ချင်ပါနဲ့ ဆိုတဲ့ အမှာစကားလေးပါဘဲ၊
ကိုလတ် အခုမှတွေ့လို့အခုမှဖတ် အခုမှမန်းတာကို စိတ်မတိုစေကြောင်း………………………
အန်တီလတ်ရေ ၊ ဗိုလ်ချုပ် နဲ့ အမေစု တို့ ကို အရမ်း လေးစားအားကျပါတယ် ။ သူတို့ လမ်းစဉ် လုပ်ရပ် စိတ်ဓါတ်များအတိုင်း လိုက်လံနေထိုင်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ… တော်ရုံတန်ရုံတော်တော့်ကို မလွယ်ကူပါ ။ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ နိုင်ငံသားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အမြဲကျင့်ကြံနေထိုင်နေပါတယ်ဗျာ ။
ဟုတ်ဖူး သူက.. ဗိုလ်လရောင်မြေး ဦးဖာဒေါ်စုတို့သား ကင်မ်အဲရစ်ရဲ့အဘိုး..ကဲဘာပြောချင်လဲ…။
ဦးနု ပြောတဲ့ ဦးအောင်ဆန်း စာပုဒ်လေးကူးသွားတယ်ဗျို့..
ဟိုက် အဲနာမည်ကြီး ဒဂယ်တွင်သွားဘီနော် ဦးမိုက်……
ကိုကိုညွန့်ကို အန်တီကြီးက စကားတခွန်းမှားခဲ့ဖူးတယ် ၉၀မတိုင်ခင်မှာ….
အကုန်လုံးကို ခုံ….ပြန်တင်မယ်ဒဲ့ ဒါကြောင့်မို့ ဒါလောက်ပြန်ကြာသွားသလားမသိ……
သေချာတာတော့ သူက အန်တီချာလို မဟုတ်ဘူးဆိုတာဘဲ…………………………….
ဖြစ်စေခြင်တာက အမေထရီလိုပဲ ကောင်းပါတယ်……………………………………….
အခုအချိန်မှာ ပိုလိုအပ်နေတဲ့ ပိုစ်ပါ အရီးလတ်ရေ ..
အရီးလတ်ကော ပြန်ဖော်ပေးတဲ့ သူကြီးကော ကျေးကျေးပါ ။
ရန်ကုန်တိုင်းမှူးဦးဝင်းနိုင် ပြည်သူများကိုအသက်စွန့်ကာကွယ်ရန် မောင်တောသို့ ယနေ့မနက်ထွက်ခွာ…
ဥပဒေမဲ့ကျူးလွန်သူအားလုံး အစိုးရက နံရံကပ် မျက်လုံးမှိတ် ပစ်သတ်ရမှာ။ ယခုတော့………..
ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက် အသေခံခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်နှင့်တကွ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များထဲမှ ဆရာကြီးဦးရာဇာတ်နှင့်ရဲဘော်ကိုထွေးအား အသိပညာအားနည်းသော အရူးများကြောင့် အားနာမိပါသည်။
ဒါမှ…..တိုင်းပြည်ရဲ့ေ၇ှ့ ရေး..ရင်အေးရမှာ.။
အရီးရေ….ပို့ စ်လေးက တကယ့်ကို အကျိုးရှိစေတဲ့ စာသားတွေပါ လား။
တင်ပြပေးလို့ ကျေးဇူး အထူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ ။
အရီးရေ နောက်တခေါက် ပြန်ဖတ်သွားပါတယ်။ ဒီတခါတော့ မန့်ဖြစ်အောင် မန့်သွားပါတယ်။
ခုတခါတော့ ကွန်းမန့်တွေ ဝေေ၀ဆာဆာနဲ့မို့ ပိုပြီးတော့တောင် မြိုင်သွားပါသေးတယ်။
ဖခင်ကြီး အကြောင်းကတော့ သိလေလေ ပိုပြီး လေးစားလေလေပါ။
ဖခင်ကြီးရဲ့ သတိပေးစကားတွေ မိန့်ခွန်းတွေက ဘယ်ခေတ်ပဲ ရောက်နေနေ လတ်ဆတ်နေဆဲ မှန်ကန်နေဆဲပါ။
ဒီလို အချိန်မှာ ပြန်ဖတ်ရတဲ့ အခါမှာ စကားလုံးတွေက ပိုလိုတောင် အသက်ဝင် မှန်ကန်လာပါသေးတယ်။
ဒီလိုအချိန်မှာ တကယ် ဖတ်သင့်တဲ့ အချိန်ကိုက် စာတပုဒ်ပါ။
ဖခင်ကြီးရဲ့ အထ္ထုပတ္တိ ဇာတ်ကားအတွက်လည်း ရင်ခုန်ရပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ် အကြောင်းကို ငယ်ငယ် ထကြတော့ သိပေမယ် 10ပုံ ပုံမျ 1.5 တောင် မရှိပါဘူး အဲ့ဒါကြောင့်
ဒီစာဖတ်ုပြိးတော့ 1လောက်သိသွားတဲ့ အတွက် ပျော်မိပါတယ် ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်
ငယ်ငယ် ကတည်းက စံပြပုဂ္ဂိုလ် ဗိုလ်ချူပ် တို့ဖခင်က
သိပ်ဝမ်းနည်းစ၇ာကောင်းတာတစ်ခုက ဗိုလ်ချုပ်ခြေဖျားမှီတဲ့ခေါင်းဆောင်၇ှိတော့ဘူး ပာုတ်တာတစ်ခုကိုထုတ်
ကာပြောမယ် ဘယ်ခေါင်းဆောင်မှလည်း မှီပါဘူး ။ ကြည့်….နားထောင် သူတို့တွေ စင်ပေါ်တွေတက်ပာစ်ကြတယ် ဘေးချအတင်းစကားတွေနဲ့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ခွပ်ကြတယ်